ငါ ALIEXPRESS ပေါ်တွင်ခြေရာခံကှကျအရေအတွက်ကိုမည်သို့သိလား - ALIEXPRESS - 2019
ယနေ့က Windows အသုံးပြုသူအဘယ်သူအားမျှအနေနဲ့ antivirus ကိုမပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ အားလုံးပြီးနောက်, နေ့တိုင်း, ကျူးကျော်သူတွေကအမျိုးမျိုးသာမန်အသုံးပြုသူများအစာကိုလုယူမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိဖို့ကြိုးစားနေ။ Anti-virus ကို၏ဖန်တီးသူလည်းသူတို့အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှခြိမ်းခြောက်မှုအနိုင်ရနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်လာဖို့နေ့တိုင်းရန်ရှိသည်။
ဒီနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံး antivirus ကိုတစ်ခုမှာ Kaspersky Internet Security ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတကယ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားကြီးလက်နက်ပါ! နှစ်တွေ Kaspersky Internet Security သူတို့နှင့်အတူစစ်၌ဤဟဲဗီးဝိတ်၏ခေါင်းစဉ်ကိုစောင့်ရှောက်။ အဘယ်သူမျှမကအခြား Anti-virus ကိုသူခြိမ်းခြောက်မှုများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတိုက်လမျး၌ကိုယ်တော်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မရပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ယနေ့ Avast Free Antivirus များနှင့် Nod32 ကို၎င်း, AVG နဲ့တခြားစျေးသည်လည်းမရှိ။ သို့သော်တစ်ကြိမ် Kaspersky Internet Security ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအသုံးပြုသူများအများအားဖြင့်တခြားအရာတစ်ခုခုသို့ကူးပြောင်းချင်ကြဘူး။ နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကား။
Kaspersky Internet Security ချက်ချင်းအသုံးပြုသူထဲသို့ဝင်ရသောအားလုံးကိုဖိုင်တွေ, ပရိုဂရမ်, နှင့်အင်တာနက်ဆိုဒ်များကို check လုပ်ပေးပါတယ်။ မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းခြိမ်းခြောက်မှု၏တည်ရှိမှုပေါ်အဖြစ်ကဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ။ ဒါကြောင့်ကူးစက်ခံရတဲ့ဖိုင်ဖျက်ပစ် disinfected သို့မဟုတ် quarantined နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့် software ဗိုင်းရပ်စ်ပါရှိသည်ပေးသောဆိုက်, သွားရောက်လေ့လာခဲ့လျှင်, Kaspersky Internet Security ကိုတိုက်ရိုက် browser ကိုပြတင်းပေါက်သို့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါကြောင့် program ကိုပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရိုးရိုး, ထို site ကိုမှမသွားနိုင်ပါ။ ဒါဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်မှားပြဌာန်းခွင့်ရှားပါးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီအစဉ်များနှင့်ကွန်ရက်များ၏ရလဒ်များကိုသင်အဓိကပြတင်းပေါက်ရှိ "အဆင့်မြင့် Tools များ" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါလျှင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤတွင်သင်ဇယားဝန် memory နဲ့ CPU ကိုအဖြစ်အဝင်အထွက်သတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်၏ပမာဏအပေါ်မြင်နိုင်ပါသည်။ အချိန်မရွေးကာလအတွက်သော့ခတ်ကွန်ယက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်ဘက်ပါပြီမည်မျှခြိမ်းခြောက်မှုများ - လည်း Kaspersky Internet Security ၏လုပျငနျးအပေါ်တစ်ဦးယေဘုယျအစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်ပြသ။
အဲဒီမှာလူတွေကိုအတုဆိုဒ်များဖန်တီးသောသူသည်အင်တာနက်လိမ်လည်သူများကိုငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုမိတ်ဆက်, Kaspersky Internet Security များအတွက်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည် antivirus ကိုတာရှည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအတုက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစွန့်ခွာဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးအရာသည်၎င်း၏ဆန့်ကျင် phishing စနစ်, လူသိများခဲ့တာ။ Kaspersky အင်တာနက်လုံခြုံရေးတစ်ဦး phishing site ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် phishing တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များ၏အခြေစိုက်စခန်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့စံရှိပါတယ်။
Kaspersky အင်တာနက်လုံခြုံရေးအဘယ်သူ၏သားသမီးများကိုသူတို့ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါမိဘများအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ဦးအလွန်အသုံးဝင်သောသည့်စနစ်ရှိပါတယ်။ စနစ်သို့ရဖို့အဓိကအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမိဘထိန်းချုပ်မှု၏ပထမဦးဆုံးမိဘများစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မှာမိတ်ဆက်သောစကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
ဒီစနစ်သင်သည်လူတယောက်အချိန်မဆိုပရိုဂရမ် access ကိုပိတ်ပင်ရန်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ခုသာအချို့သောအချိန်ဥပမာ, တစ်နာရီအဘို့အဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မိဘများဥပမာကွန်ပျူတာအချို့ကြားကာလအတွက်အားလပ်ချိန်ကိုပြုတိုင်းနာရီစေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား parameters တွေကိုတနင်္ဂနွေအလုပ်လုပ်နေ့ရက်ကာလအဘို့သီးခြားစီရရှိနိုင်ပါနှင့်သီးခြားစီရှိပါတယ်။
အားလုံးအထက်ပါ features တွေကို "ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်" မိဘထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သည် "Programs ကို" tab မှာ, သင်သည်အဘယ်သူ၏အသက်အရွယ်အသက် 18 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များ၏ပစ်လွှတ်ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သာအဘို့ကို run ပါလိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီ၏အစီအစဉ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများထူနိုငျသညျ။
"Internet" tab မှာ, အချို့ကိုသင်အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးများအင်တာနက် access ကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်ကိုသာတစ်နာရီတစ်နေ့အဘို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်, အကြမ်းဖက်မှုမြင်ကွင်းများနှင့်ကလေးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်းမရှိဘဲလူအားလုံးအားလုံးကိုမှာမလိုအပ်ကြောင်းအခြားအကြောင်းအရာကိုဆံ့ကြောင်းဆိုဒ်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်များလည်ပတ်မှုကိုလည်းကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူထိုအကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကို Safe Search ကိုဟုခေါ်သည့်အင်္ဂါရပ်ရှိပါသည်။
Tab ကို "ဆက်သွယ်ရေး" သင်လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတိကျတဲ့အဆက်အသွယ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုဤနေရာတွင်သင်က Facebook, Twitter နဲ့ MySpace မှအဆက်အသွယ်ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က "အကြောင်းအရာထိန်းချုပ်ရေး" တွင်မိဘများသင့်ကလေးအပေါ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်သူလျှိုကို set up နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူကိုမကြာခဏအခြားလူများနှင့်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့စကားလုံးကိုသိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကအစတတိယပါတီများမှမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. အတူလူအပေါင်းတို့၏အပြောင်းအရွှေ့တားမြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဘဏ်အကောင့်များလိပ်စာများနှင့်အလားတူဒေတာလောက်စကားပြောနေကြသည်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ် - သူငယ်ကိုဥပမာခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်၏မိဘ, အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှစာထဲတွင်ရေးသားခဲ့သည်လျှင်။
Kaspersky အင်တာနက်လုံခြုံရေးလုံခြုံကော်မရှင်ငွေပေးချေ၏အလွန်ထိရောက်သောစနစ်ကရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကသာသီအိုရီအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်, တိုက်ခိုက်သူတွေပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုကြားဖြတ်များအတွက်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ဦးငွေပေးချေမှုစေသည်အခါ, အချိန်မရွေးငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်များ clipboard ထံသို့ကျရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Kaspersky Internet Security ၏လုပျငနျး system ကိုစတင် - ကဒါ့အပြင်အဆိုပါကြားခံအတွက်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုစာဝှက်ပေးတယ်။
ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်, လုံခြုံငွေပေးချေ၏ system ကိုဒေတာ transfer စဉ်အတွင်းရိုက်ချက်ကျူးလွန်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သလောက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာကြိုဆိုနှင့်ကြားခံ၌နေသောပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို access လုပ်ဖို့ဟက်ကာများကအသုံးပြု - ရုံဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးမျက်နှာပြင်၏ရုပ်ပုံများကိုယူပါ။ ဒါပေမယ့် hypervisor များ၏ပေါင်းစပ်, DirectX®နှင့် OpenGL ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနီးပါးမဖြစ်နိုင်စေသည်။
ဒီစနစ်အလိုအလျှောက် run ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါငွေပေးချေမှုစနစ်အား site ၏ဖွင့်ပွဲမှာအသုံးပြုသူလုံခြုံငွေပေးချေ၏ဤတူညီသော system ကိုသုံးပြီးသောလုံခြုံသောဘရောက်ဇာကိုခေါ်ဘာအတွက် site ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အချက်ပြတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်လိမ့်မည်။ သင့်လျော်သောခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း, အသုံးပြုသူ Kaspersky Internet Security အားဖြင့် system ကိုစတင်သည်။
အခုဆိုရင်လည်းဘုံပုံမှန်အသုံးပြုသူကွန်ပျူတာပေါ်မှာလဲငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်ပေါ်မှာအချက်အလက်တွေအားလုံးကို, စုဆောင်းရန်စတင်သေးငယ်တဲ့အစီအစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဟက်ကာများသည်သူ၏သားကောင်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်ရှာတွေ့ဖို့ webcam မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိဖို့ကြိုးစားနေ။ ဒါကြောင့် Kaspersky Internet Security အတွက် "privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း" သူတို့ကပြုစေမည်မဟုတ်။
ဒီတော့သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့မဆိုအခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ကိုပရိုဂရမ်ကိုလည်းဒေတာသစ်လုံးတွေ, cookies, သင်း၏သမိုင်းနှင့်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုယူနိုငျသောအနေဖြင့်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ menu ကိုရရန်, အဓိကပြတင်းပေါက်ရှိ "Options ကို" ကိုနှိပ်ပါ။
safe mode အစီအစဉ်များ
အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည် safe mode အစီအစဉ်များ၏တူညီသော Menu ထဲမှာ။ သင်ကဖွင့်လျှင်, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်သောသူကဲ့သို့ database တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ကြောင်းသာအစီအစဉ်များ, "Kaspersky Lab မှ" ကို run ပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ Kaspersky အတွက်ခွင့်ပြုချက်အားဖွငျ့သင်၏ဖုန်း, တက်ဘလက်နှင့် netbook မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့်ဤသူအပေါင်းတို့ကို remote access ကို အသုံးပြု. အင်တာနက်မှတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ function နောက်ထပ် features တွေစာရင်းရှိ "အင်တာနက်ကိုအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု" ကိုအကူးအပြောင်းပြီးနောက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြှနျုပျ၏ Kaspersky အတွက် log လည်း "Kaspersky Lab မှ" မှထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုကနေအမြန်ဆုံးအကူအညီရကူညီပေးသည်။
အခြားသူများကိုအလျင်အမြန်ပြုလုပ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဒီနည်းပညာအသုံးပြုသူများမိုဃ်းတိမ်၌အသစ်သောခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ထွန်းသစ်စခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုချက်ချင်းမိုဃ်းတိမ်မှကျရောက်, အဲဒါကိုအကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်များအတွက် check လုပ်ထားနှင့်ဒေတာဘေ့စသို့ ဝင်. ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ဆိုလိုသည်မှာချက်ချင်း, On-line ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာဘေ့စ update လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အသစ်ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုး Anti-virus ကိုပညာအတတ်မရှိဘဲကွန်ပျူတာကူးစက်ခွင့်ပြုမယ်လို့သောမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာဘေ့စကို manually update လုပ်ရမည်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မရှိရင်။
ဒါ့အပြင်မိုဃ်းတိမ်၌ web site များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင့်ရဲ့ site ကိုမှကြွလာနှင့်အ, ကဘေးကင်းလုံခြုံပါလျှင် (ကွန်ပျူတာရန်မခြိမ်းခြောက်မှုများရှိခဲ့သည်ဗိုင်းရပ်စ်တယ်, ဒါကြောင့်အပေါ်မထားပါဘူး) သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်နိုင်အောင်ကအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်မှတျတမျးတငျထား - ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အခြားအသုံးပြုသူ Kaspersky Internet Security အထံတော်သို့လာကြလိမ့်မည်သည့်အခါသူသည်ဤ website ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ရှုမည်, လျှို့ဝှက်မပေးအဖြစ်ဒေတာဘေ့စတှငျမှတျတမျးတငျထားသနှင့်နေသည်။
program ကို Kaspersky Internet Security ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသင်အားနည်းချက်များများအတွက် system ကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးစဉ်အတွင်းဖိုင်တွေအားလုံးကိုလုံးဝ check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုထိတွေ့နေကြနဲ့တိုက်ခိုက်ဒေတာသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုငျသောမှတစ်ဆင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရနိုင်ကြောင်းကုဒ်တဖဲ့ကိုရှာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ code လည်း file ကိုဖျက်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပါကမလိုအပ်လျှင်ကာကွယ်ထားသည်။
ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်, Kaspersky Internet Security ဗိုင်းရပ်စ်စေသောအရာ, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စစ်ဆေးသူတို့ကို fix နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကဖိုင်တွေဖျက်ခံရဖို့လိုအပ်ပေမယ့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, အထူးစနစ်ကစနစ်တှငျမှတျတမျးတငျထားသ၎င်းတို့၏ယခင်ဗားရှင်း, ရည်ညွှန်းပြီး, သင်ပျက်စီးသွားသော file တွေကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော, လျှောက်ထားသည်။
မဆို user တစ်ယောက်ကအော်ပရေတာ, "Kaspersky Lab မှ" မှအကူအညီရသို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စအတွက်ပြဿနာအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအဓိကအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်၌ပံ့ပိုးမှုအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာသင် program ကိုဖွင့် setting အပေါ်အကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှုနှင့်ဖိုရမ်အပေါ်အခြားအသုံးပြုသူများနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျသညျ။
အတွက် Kaspersky Internet Security setting များကိုသာစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပရိုဂရမ်အချို့ features တွေကို disable နှင့် power-saving mode သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များနိမ့်စားသုံးမှုအောင်မြင်ရန်အခြားနည်းလမ်းကို run လို့မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သေချာသင်စတင်သောအခါအသင့်ကွန်ပျူတာကိုသာအရေးအပါဆုံးကတော့ Kaspersky Internet Security ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်တစ်ကြိမ်မှာအားလုံးပြေး။ စေနိုင် ထိုသို့သောတစ်ခုချဉ်းကပ်တဖြည်းဖြည်းကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုသုံးပြီး, ရုံ system ပေါ်တွင်အလွန်အကျွံဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ချဉ်းကပ်ကွန်ပျူတာပျင်းရိဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အစီအစဉ်၏အခြေခံလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကအသုံးပြုသူကအခြားပရိုဂရမ်များအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်သောအခါ, Kaspersky Internet Security သာ Real-time ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ အားလုံးကြွင်းသောအရာတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, နှင့် update ကိုမစတင်ပါလိမ့်မယ်။ သင် setting များကို icon ကို click ပါလျှင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထူနိုငျသညျ။
ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ spyware အမျိုးမျိုးတို့တဘက်၌အလွန်အစွမ်းထက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချဖို့ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုနေသော်လည်းနှေးကွေးစက်တွေအပေါ် Kaspersky Internet Security နေဆဲအလွန်စနစ်နှေးကွေးသည်။
ယနေ့ Kaspersky Internet Security မှန်ကန်စွာတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အလွန်လေးနက်သောခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒါကအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းကယ့်ကွန်ပျူတာ၏လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတိုက်မည်အကြောင်း, ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်အမှန်တကယ်သူရဲဖြစ်ပါတယ်။ Kaspersky Internet Security ၏လိုင်စင်ပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်တကယ်အရည်အသွေးမြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့, ယုံကြည်စိတ်ချရဂရုစိုက်သည်မှန်လျှင်, Kaspersky Internet Security ကိုရွေးချယ်ပါ။
Kaspersky Internet Security program ၏စမ်းသပ်မှုဗားရှင်း Download
Kaspersky Internet Security ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို က Norton Internet Security Comodo Internet Security Kaspersky Rescue Disk
Kaspersky Internet Security - ကွန်ပျူတာထဲမှာများအတွက်ထိရောက်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ပြီးပြည့်စုံသော software များဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုပေါ်တွင်ဒေတာနှင့်အသုံးပြုသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို။
အမျိုးအစား: Windows အတွက် Antivirus ကို
ကုန်ကျစရိတ်: $ 8
ဗားရှင်း: 19.0.0.1088 RC
ဗီဒီယို Watch: JUNSUN H7 KAMERA İNCELEMESİ-REVIEW-Subtitles in all languages AliExpress (သြဂုတ်လ 2019).